UDasic Fernández upeyinta igrafiti engaphezulu eNew York | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umzobo oqaqambileyo opeyintwe phantsi kwebhulorho nguDasic Fernández
Imbono inako unike enye ifom kunye nomnye umbono kwimisebenzi kanye njengoko isenzeka xa ujonga zonke iintlobo zezinto ezinje ngobomi bethu okanye ezo ziganeko zenzeka kuluntu oluhamba ngesantya esingalawulekiyo. Ukusuka kwindawo ethile sinokufumana umsebenzi weplastiki ojika iindonga ezingwevu zibe ngumbala kunye nobomi.
Nantsi into eyenzekayo ngesi siphakamiso sokuyila ngohlobo lwe eludongeni ezenziwe phantsi kwebhulorho ngumzobi uDasic Fernández. Kukwimbono apho kwifoto yentloko sinokonwabela olo luhlu lwezakhiwo eziguqulwa zenziwe imilo yeetyhubhu.
Idasic yi Umculi waseChilene ohlala kwaye esebenza eNew York apho ayila khona imizobo emikhulu yokuzoba, imizobo, imifanekiso eqingqiweyo kunye neminye imisebenzi kwiindlela ezahlukeneyo ezahlukeneyo, kodwa ezineedemon ezifanayo ezinombala.
Omnye wemisebenzi yakhe ebabazekayo sisiqwenga esikhulu asipeyinti eNewburth, eNew York. Thatha ubude bebhulorho ngaphantsi kwayo ukwenza isiphumo sokubakho phambi kodonga olukhulu apho apeyinta khona umzobo ogcwele ubomi, umbala kunye nembono. Umzobo ogcwalisa ezo ndawo zingwevu phantsi kweebhlorho ezinombala kwaye ngombono wazo omangalisayo uyakwazi ukumilisela ezo zikhewu zingenanto uyokumamela.
I-Dasic ayizisanga imizobo yakhe kwizitrato zaseNew York, kodwa nayo inokubonwa nakwezinye iidolophu njenge-Austin, iChicago, iDetroit, iNew York, iToronto, iSao Paulo, iRio de Janeiro kunye neBuenos Aires.
Umzobo omkhulu osuka kwi indawo ekujongwa kuyo umfanekiso, Kuthatha ixesha ukuqonda ukuba sijonge kwibhulorho endaweni yodonga olukhulu.
Ngomnye umbono, le eminye imizobo okanye imizobo eseludongeni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Umzobo oqaqambileyo opeyintwe phantsi kwebhulorho nguDasic Fernández
Umzobo owenziwe ngeziqwenga zekhodiyani nguJolita Vaitkut